Waqtiga Dheeriga ah | LawHelp Minnesota
Waqtiga Dheeriga ah
Waxaa jira sharciyo quseeya waqtiga dheeraadka ah ee shaqada oo ay dowlada dhexe iyo tan gobolkuba leeyihiin. Waxa ay yihiin Sharciga Xoogsiga Xaqqa ah (FLSA) ee Dowlada dhexe iyo kan Minnesota ee dhigiisa ah ee (FLSA). Labada sharci kii hadba ku siiyaa faa’iidada ugu badan weeye kan aad isticmaali. Xaaladaha intooda badan sharciga dowlada dhexe ayaa ka adag kan gobolka waxa uuna quseeyaa shaqaalaha intooda badan, kolkaa, isaga ayaa xukuma go’aanada. Sharciga dowlada dhexe waxa uu u baahan yahay saacadaha dheeraad lacagtood in la bixiyo kolka saacado yar kuwa gobolku rabo la shaqeeyo. Wixii akhbaar ah oo ku saabsan shaqaalaha soo hoos galiya sharciga dowlada dhexe, ka eeg Warqada Xogta Aruursan #14 ee Wasaarada Shaqada ee Dowlada dhexe (Department of Labor) ee www.dol.gov/whd.
Hadii aad xaq u leedahay sharciyan in lagu siiyo lacagta saacadaha dheeriga ah, waa sharci-darro in shaqadu ay isku daydo inay waanwaan adiga kula gasho ah inaysan lacagtaa bixin. Arrintani ma quseeyso hadii aad saacado buuxa shaqeysa ama aad saacada yar shaqayso. Qolada shaqadu waa khasab inay siiso qofka shaqaalaha ah lacagta saacadaha dheeriga ah aan ka ahayn in qolada shaqadu ay cadeyn karto in qofkaa shaqaalaha ah laga “reebay” sharcigaa. Shaqaalaha intooda badan ma soo hoos galaan wax ka reebitaan ah waxaana loogu yeeraa shaqaalaha aan “laga reebin.” Shaqaalaha aan sharciga laga reebin waa in la siiyaa dhamaan xaqqa saacadaha dheeriga ah ee shaqeeyaan saacad walba oo ay shaqeeyaan. Wixii akhbaar ah ee ku saabsan ciddii laga “reebay” ama “aan la reebin,” sharcigan, ka eeg warqadayada xogta aruursan ee Martabada Shaqada iyo Xaquuqdaada Job Status and Your Rights.
Mar walba waa ra’yi wacan inaad adigu saacadahaaga iskaa ula socota oo u xisaabsato. Qor kolka aad shaqada bilowdo iyo kolka aad ka baxdo maalin walba. Ku xafid qoraaladan meel amaan ah.
Faritaanada Sharciga Dowlada Dhexe iyo Gobolka
Sharciga Xoogsiga Xaqqa ah (FLSA) ee Dowlada dhexe waxa uu faraa intooda badan shaqooyinka inay bixiyaan lacagta dheeriga ah ee saacad walba wixii saacado ah ee ka badan 40 ka saac ee asbuucii la shaqeeyo. Asbuucii maalmaha la shaqeynayo waxaa gooya shaqada. Inta badana waa Axad-Sabti, asbuuc walba ama waa muddo taa la mid ah oo asbuucle ah.
Sharciga Minnesota ee (FLSA) waxa uu faraa shaqooyinka inay bixiyaan lacagta dheeriga ah ee saacad walba wixii saacado ah ee ka badan 48 ka saac ee asbuucii la shaqeeyo. Shuruudani waxa ay ku quseeyn uun hadii adiga ama shaqadaadu aydnaan hoos tagayn sharciga dowlada dhexe.
Waa maxay qaar ka mid ah xeerarka ku saabsan saacadaha la shaqeeyo iyo bixinta lacagta dheeriga ee saacad walba oo siyaado ah?
Saacadaha dheeriga ah waxaa loogu xisaabtamaa mudadda asbuuca shaqada la qabto ee ma aha mid maalin walba ah. Kolkaa, hadii aad shaqayso saacado ka badan 8 saac hal maalin laakiin aadan shaqeyn 40 saac ka badan asbuuca shaqada oo dhan, kolkaa ma aad halaysid lacagta saacadaha dheeriga ah maalinta aad saacadaha badan shaqaysay.
Saacadaha shaqadu la iskuma celcelin karo mudadda lacag qaadashada – oo badanaa ah 2 asbuuc oo kasta. Si kale hadii loo yiraa shaqadaadu kuma oran karto shaqee 50 saacadood hal asbuuc, asbuuca xigana kuma oran karto shaqee uun 30 saacadood si ay isaga ilaaliyaan bixinta lacagta saacadaha dheeriga ah. Waxaa khasab in lagu siiyo lacagta saacadaha dheeriga ah 10 saac ee dheeriga ah ee asbuuca koowaad aad ka shaqaysay.
Maalmaha asbuuca ee shaqadu waxay noqon karaan 7-cisho oo is xigta asbuucii. Waxaana gooya qolada shaqada, lama bedeli karo hadii uusan isbedelku ahayn isbedel joogta ah.
Ogow: Xeerarku waxaa dhici karta inay saa ka duwan yihiin hadii aad ka shaqeyso rug caafimaad. Maalmaha asbuuca ee shaqada waxaa dhici karta in loo gooyo si ka duwan si kale iyadoo la isticmaalayo jadwalka “8/80.”
Hadii aad uga shaqeyso in ka badan hal shaqo isla hal qolo oo shaqo, waxaa aad isku dari dhamaan saacadahaaga labada shaqo oo dhan kolka aad xisaabinayso inta saacadood oo dheeri ah oo aad shaqaysay.
Kaliya saacadaha aad shaqeysay uun baa lagu xisaabin saacadaha dheeriga ah. Faystooyinka, faxayada iyo lacagta kolka xanuunka lagu maqan yahay la bixiyo looma xisaabiyo sidii saacado la shaqeeyey oo kale.
Qolada shaqada ayaa go’aansata hadii aad shaqeynayso saacadaha dheeraadka ah iyo hadii kale. Waa lagu ganaaxi karaa ama waxa aad dhumin kartaa shaqadaada hadii aad tiraa maya.
Qaar badan oo ka mid ah qolyaha loo shaqeeyo waxay kaa rabaan inaad iyaga ogolaansho ka hesho ka hor inta aadan shaqeyn wax saacado oo dheeri ah. Ka hor inta aadan shaqeyn saacado siyaado ah, la hadal hor-joogahaaga si aad u hubiso inay sax tahay inaad saa sameyn karto.
Hadii aad shaqeyso saacado dheeri ah AADNA ka helin ogolaansho hor-joogahaaga, qolada shaqadu waa inay mar walba lacagta saacadahaa ku siiso xataa hadii aadan raacin xeerarka. Laakiin xusuusnow, waa laguu ganaaxi karaa helid la’aanta ogolaanshaha taasina waxa ay keeni kartaa dhibaatooyin. Mar walba waxaa fiican inaad raaco xeerarka shaqada aadna waydiiso xeerarka shaqeynta saacadaha dheeriga ah hadii taasi ay tahay midka mid ah xeerarka.
Marna ha shaqeyn iyadoon “garaacan kaarkaaga.” Taa macnaheedu waa mar walba oo aad shaqeynayso hubi inaad kaarkaaga garaacato, si kolkaa laguu siiyo lacagta shaqada aad qabayso.
Hadii aad naafa tahay, waxa aad codsan kartaa in adiga wax lagaaga bedelo shaqeynta khasabka ah ee saacadaha dheeriga ah. Tan waxaa loogu yeeraa maciinada macquulka ah.
Siddee ku ogaadaa inaan helay lacagta saacadaha dheeriga ah ee aan shaqeeyo?
In lagu siiyo lacagta saacadaha dheeriga ee shaqada iyo in kale waxa ay ku xiran tahay inaad tahay shaqaale laga “reebay” ama “aan laga reebin.” Inaad saacad ku shaqeyso ama aad mushaar ku shaqeyso mar walba ma muhiim ma aha, laakiin shaqaalaha laga reebo arrintan waxaa badanaa la siiyaa saacadii waxa ay shaqeystaan. Waydii qoladaada shaqada hadii aadan hubin midka aad tahay.
Tusaalooyin ah shaqooyinka laga “reebay” bixinta lacagta dheeriga ahi hadii shaqadu ay ka soo baxdo qeexida sharciga ah ee ka reebitaanada:
Qof madax sare ah, maamul ama xirfadle ah oo ku shaqeeya mushaar. Mushaarku waa cadad lacag cayiman ah oo horey loo soo gooyey oo lagu siiyo asbuuciiba mar. Ma aha wax saacad lagu shaqeeyo.
Qaar ka mid ah shaqaalaha dukaamada ama adeega waxay ku shaqeeyaan in qayb laga siiyo wixii faa’iido ah ee ay soo saaraan.
Dilaalayda aan shaqada ka tirsanayn.
Qaar ka mid ah shaqaalaha goobaha gawaarida gada ama hagaajiya gawaarida waxay ku shaqeyaan in qayb laga siiyo wixii faa’iido ah ee ay soo saaraan ama dadaalkooda ayaa wax lagu siiyaa.
Qaar ka mid ah xoogsatada beeraha ka shaqeysa.
Waa maxay heerka lacagta saacadaha dheeriga ah ee shaqadu?
Heerka lacagta saacadaha dheeriga ahi waa ugu yaraan “hal saac lacagteed iyo bar.” Taa macnaheedu waa saacadii caadiyan inta aad ku shaqeyso oo lagu darayo barkeed inta saacadii aad ku shaqayso. Hadii saacadii aad ku shaqayso $20 saacadii, wixii saacado ah ee aad shaqayso ee ka badan 40-saac asbuucii waxaa lagugu siin $30 saacadiiba ama hal saac iyo bar.
Badanaa, heerka lacagta saacadaha dheeriga ahi waa khasab inay ku salaysnaato dhamaan wixii lacag ah oo aad hesho oo dhan ee aysan ahaan saacadii inta aad ku shaqeyso uun. Tusaale ahaan, gunada, lacagta kale ee gelinada qaarkood dadka shaqeeyaa la siiyo, iyo burooyinka intooda badan waa khasab in lagu daro heerka lacagta saacadaha dheeriga ah lagu salaynayo.
Ma waydiisan karaan shaqada lacag waqtiga dheeriga ah oo ay ahayd inay i siiyaan mar hore oo la so dhaafay?
Haa. Laakiin cadadka ugu badan ee lacagta waqtiga dheeriga ah ee aad sheegan kartaa waa badanaa waxay ay dib ugu noqon karaa uun 2-sanno. Marmarka qaarkood, hadii la cadeyn karo in qolada shaqadu ay khaa’inimo kas ay sameysay, kolkaa waxay noqoto kartaa ilaa 3-sanno.
Ka waran hadii aan su’aalo qabo?
Waa inaad la xiriirto mid ka mid ah hay’ada hoose ama qareen qaabilsan sharciyada shaqada.
Waaxda Shaqada iyo Nidaamyada Meheradaha Shaqada ee Minnesota (Minnesota Department of Labor and Industry Labor Standards)
Telefanka ah: (651) 284-5005 ama 1-800-DIAL-DLI (1-800-342-5354)
Laanta Saacadaha iyo Lacagta Shaqada ee Dowlada Dhexe ee Wasaarada Shaqada ee U.S. (Federal Wage and Hour Division, U.S. Department of Labor)
Telefanka ah: 1-866-4USWAGE (1-866-487-9243)